एनआरएनए अमेरिका निर्वाचन २०२१-२०२३, निर्वाचित पदाधिकारीहरु – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
एनआरएनए अमेरिका निर्वाचन २०२१-२०२३, निर्वाचित पदाधिकारीहरु
प्रकाशित: २०७८ जेठ १७ गते १६:४१
अमेरिका – एनआरएनए अमेरिकाको अध्यक्ष पदमा बुद्दीसागर सुवेदी निर्वाचित भएका छन । कुल २०१३८ मतदाता रहेको सबैभन्दा ठुलो एनसिसी एनआरएनए अमेरिकामा १५७६८ मतदाताले निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्दी कृष्ण लामिछाने ३५० भोटले पछी पार्दै सुवेदी शक्तिशाली एनआरएनए अमेरिकाको अध्यक्ष पदमा आफ्ना बहुमत पदाधिकारीहरु र सदस्यहरु सहित निर्वाचित भएका छन ।
निर्वाचनमा डा. अर्जुन बन्जाडे तेस्रो भए भने सिन्डिकेटको नारा सहित लडेका तिलक केसी चौथो भए । सुवेदीले कुल मतको ३६ प्रतिशत अर्थात ५ हजार ६ सय १८ मत ल्याई विजयी भएका हुन् । अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी कृष्ण लामिछानेले ५ हजार २ सय ६८ मत ल्याएका छन् भने डा. अर्जुन बञ्जाडेले ४ हजार १ सय भोट ४८ मत ल्याए । यसैगरी ५६७ मत ल्याई तिलक केसी चौथो स्थानमा सीमित भए । ​
यसैगरी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा एनआरएनए अमेरिकाका निवर्तमान उपाध्यक्ष कृष्णजीबी पन्थ विजयी भएका छन् । गत निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेर बिजयी भएका पन्थ बलिया बिआर लामालाई उछिन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन ।
एनआरएनए अमेरिकाको निर्वाचन २०२१-२०२३ का लागि निर्वाचित पदाधिकारीहरु :
अध्यक्ष : बुद्धीसागर सुवेदी
वरिष्ठ उपाध्यक्ष : कृष्णजिबी पन्थ
बिकास उप्रेती र
महिला उपाध्यक्ष : दिक्षा बस्नेत
महासचिव : अन्जनकुमार चौलागाईं
सचिव : अनुप खनाल
कोषाध्यक्ष : राजिब श्रेष्ठ
सह-कोषाध्यक्ष : अग्नी ढकाल
महिला सचिव : सुनिता कंडेल सापकोटा
महिला संयोजक : सुन्दरी गुरुङ्ग
युवा संयोजक : त्रिभुवन पाण्डे
बोर्ड सदस्यहरु :
डा. प्रकाश श्रेष्ठ,
शान्ति वाग्ले पौडेल,
दुर्गेश कार्की र
राज ढुंगाना ।
अमेरिकाबाट निर्वाचित आईसिसी सदस्यहरु :
बिनोद तिवारी र
बिष्णु शाह विजयी भएका छन् ।